Ukumboza indaba for rose ebusika: i Uhlolojikelele, izici, imibono kanye nokubuyekeza
Yena wathola isicoco zendlovukazi nensimu ubuhle izimbali, rose has a bomoya kunalokho ezingezwakali. Ukuze ezihlabayo yayo aluhlaza izimbali uyajabula kanti iphunga esiyingqayizivele, isitshalo kudinga ukunakekelwa njalo. Akuwona wonke izinhlobo bayakwazi ukumelana Russian ebusika, ngakho ilindele kubanda neqhwa, sekuyisikhathi ucabange indlela ukufihla rose ebusika ikhava ezibonakalayo futhi, okubaluleke kakhulu, iyiphi ukukhetha. Manje emakethe linikeza lenqwaba izimpahla.
Kanyenti balimi ungacabangi mayelana onjani indlela ukukhetha ikhava, uthabathe impahla ukuthi ususondele. Yini okumelwe uyenze? Thenga okukhethekile ezitolo ezikhethekile Indwangu okungezona nokwelukiweyo, noma ukwakha ukuzivikela zakho? Impendulo yalo mbuzo akuncikile phezu futhi kudinga indlela enezici, ikhumbula izimo zezulu, amathuba zezimali ngisho uhlobo rose. Okuvame kakhulu impahla isifulelo rose ebusika - kuba polyethylene, kanye namahlamvu omile nesihlahla sonwele amagatsha ngesihlahla sonwele spandbond, geotextiles, lutrasil. Mayelana nabo sizoxoxa ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Polyethylene indaba ethandwa kakhulu phakathi balimi mhlawumbe. Ububanzi bokusebenzisa yayo iphakeme kakhulu (abamba ukushisa, zokugcina izithombo, imibhede entwasahlobo, nokunye. D.). Nokho, nge ukuvela emakethe materials ngaphezulu yesimanje nezobuchwepheshe, waqala ukulahlekelwa phansi kancane kancane. Omunye bokwenza eyinhloko polyethylene - yena engasaphefumuli, okungukuthi, ukuvala nabo rose noma yimuphi omunye isiko, uvimbela umoya-mpilo. Isimo ejwayelekile lapho izitshalo zishiswa ngu polyethylene. izimfanelo ezinhle - ukukhuthazela, ikhono ukugcina ukushisa, eziphansi. a impahla okunjalo lokusibekela rose ebusika ingasetshenziswa esiphuthumayo futhi ngokuqapha.
Ubuchwepheshe ilula. Pretreated rose ezihlabayo iphuma futhi aboshiwe ngesimo nemengamo (hhayi kakhulu) a lwesikhathi predetermined embhedeni. Khona-ke wabeka ukufulela ezibonakalayo futhi phezu - polyethylene. Kubalulekile ucindezela umphetho lendwangu ukuze unciphise umswakama. Umgomo oyinhloko noma iyiphi indawo yokuhlala - ukudalwa i isiguqo emoyeni ngaphakathi, kuphi aluka izikhatha zomoya oshisayo. ikhava Spring isuswe kancane kancane: okokuqala, ekupheleni evulekile ubhekene ukuthi rose kungukuthi ibolile, futhi phezu okuvela ukushisa nhlobo ezihlabayo khulula.
Spunbond - okungezona nokwelukiweyo ufune ukuhlanganisa indaba kuphela (i-rose ebusika kanye), uye abe ehlukile enhle kuya polyethylene evamile. Inzuzo yayo eyinhloko - i isilinganiso esihle yentengo nokusebenza. Spunbond ukwazi ukwakha izimo ezikahle ukukhanya izitshalo (omnyama, opaque, ngokuphambene, kusiza ukulawula ukhula), ukuvikela ke elangeni elishisa bhe, okuyinto ebaluleke for rose ngasekuqaleni kwentwasahlobo. It ngokushesha futhi kalula ikuvumela emoyeni futhi umswakama, uyephuza kungenalo Ukungena sezihlahla of izinambuzane namagundane, ukugqoka ukumelana futhi ingasetshenziswa zonyaka eziningana. Spunbond kucuketse ukwehlisa izinga lokushisa ukuze -55 ° C.
Lokhu kwaziswa lokusibekela ngezimbali amanani ebusika (impendulo ubumuhle kakhulu) ayibizi kakhulu. Ingasetshenziselwa ngezindlela ezahlukene. Ukuze isitshalo isihlahla kuqala kudingekile ukwakha uhlaka ngokhuni noma ukubeka arc, futhi wabeka phezu spunbond. Kuyinto elula kakhulu rose ukugibela, okuyinto akudingeki asuswe ukwesekwa, futhi impahla ngokwanele ukuba bopha futhi uvikelekile nge izingubo izikhonkwane noma isibhamu okuyisisekelo. Stam izinhlobo bend phansi cishe kungenakwenzeka, ngakho kufanele qedani. Ungenza kwesikhwama ayengayilungiselelanga yezinto ezibonakalayo. okungezona nokwelukiweyo, noma umane bopha kubo izitshalo isiqu ngokucophelela, futhi ngokucophelela uvikelekile phezulu ngentambo esithambile.
Spandbond uye baziswa, nahlulele by ukubuyekezwa. Abalimi bathi okuthembekile, kulula ukusingatha (isitoreji, inhlangano, omiswe) futhi ngempumelelo. Rose ezihlabayo nezinye izitshalo overwinter kahle, futhi ingasetshenziswa emva ebusika Indwangu impahla nezinye izinjongo engadini.
Isikhathi esijwayelekile ikhava rose ubusika ikhava impahla - isilinganiso ezidingekayo uma ufuna ukugcina isitshalo kuze ngonyaka olandelayo. Eminyakeni yamuva, geotextile kuthandwa. Ekuqaleni kwathiwa Nokho, eyenzelwe emkhakheni wezokwakha, ngenxa isakhiwo kanye izakhiwo isibe esisemqoka ukulima. Geotextile ilungele ukuvikelwa izitshalo ngokumelene isikhunta, isithwathwa namagundane. Pluses impahla: amandla (hhayi ukubola), ikhono kudlule umoya futhi umswakama, okuvumela condensate ngokweqile shabalala, ukuyikhokhela.
ekufihleni ubuchwepheshe efana ukuthi uma usebenzisa spunbond futhi achazwe ngenhla. Ngo ukulima, kungcono ukusebenzisa kwabantu geotextile 200 amagremu per imitha square Manje ezitolo ungakwazi ukuthenga izinto, hhayi kuphela kwi-ingxenye, kodwa futhi izikhwama ngomumo eyenziwe omthunzi rose nezinye nezihlahla.
Popular impahla isifulelo rose ebusika, okuyinto libuyekeza ikakhulukazi omuhle. It is ezenziwa ubuchwepheshe obufanayo ekukhiqizeni spunbond, futhi ngenxa yalokho sinezici efanayo. izimfanelo ezinhle: ukuqina, kalula yesitoreji (ngokwanele ukuze ome, emhlambini futhi ususe), eco-friendly, ivumela umswakama nomoya, okungabizi. It iyahlukahluka kuye ngokuthi kwabantu. Ukumboza rose ngaphansi ukusetshenziswa ebusika impahla onenkomba 60 amagremu ngamunye imitha square. m. Ngokuqondene ziqhathaniswa spunbond ke lutrasil elahlekelwa kuphela ezingeni yokumelana UV ukukhanya. ekufihleni ubuchwepheshe kuyafana.
Ngesihlahla sonwele saseYurophu emi amagatsha ngesihlahla sonwele kanye namahlamvu omile
namahlamvu omile, akhiqizwa izinto eziningi ngokwanele ekwindla, kanye okunokwethenjelwa sonwele coniferous amagatsha - bendabuko impahla isifulelo rose ebusika, okuyinto kubhekwa omunye the best. Wayengekhona ezibizayo, kodwa kuyodingeka sibekele eceleni isikhathi uhambo ehlathini, futhi imvelo, ukusiza ukuvikela izitshalo kusuka frost, hhayi kuphela, kodwa futhi kusukela namagundane eziwuhlupho ezingaba ukubhubhisa konke endleleni yayo. Pine noma ngesihlahla sonwele sonwele amagatsha ivikela kahle kusuka umoya abandayo, imvula okokuqandisa, ingele futhi sidala i isikhala enhle ngaphakathi yokukhosela umoya kakhulu. Ngaphansi esembozweni sawo eshelelayo eshisa kakhulu futhi yehlise mathonya alimazayo ka kwelanga ebusika.
Kodwa, njenganoma yiluphi izinto ngesikhathi lapnika has nezihibe. Okokuqala, preform uvunyelwe amagatsha kuphela kakade ezazigawula imithi ezindaweni ezithile noma sanitary yokuhlanza indawo. Okwesibili, uma ihlathi okude, kuyoba nzima ukuba Thenga kakhulu amagatsha ngesihlahla sonwele. Okwesithathu, kukhona kungenzeka ukubeka kanye amagatsha kusayithi izinambuzane noma isifo ezihlukahlukene. Ngakho-ke, ukuhamba emahlathini, kudingeka uhlole ngokucophelela izihlahla, kusukela ofuna ukuthatha amagatsha ngesihlahla sonwele.
ekufihleni ubuchwepheshe sonwele amagatsha ngesihlahla sonwele
Ngaphambi nendawo yokuhlala ebusika rose kancane kancane, ngezigaba. Inqubo izihlahla liyadingeka kungakhathaliseki oyisebenzisayo amagatsha fir noma ngesihlahla sonwele zokwenziwa nonwoven. secateurs Cijela Rose amahlumela wayewuthena ukuze ukuphakama 40-50 cm, engasekho. Khona-ke, susa yonke amahlamvu, Spud phansi ngemva frost kuqala ufafaze Peat. Lapho izinga lokushisa komoya ingezansi oholayo (-6-7 ° C), ikhava phezulu rose notshani lapnikom coniferous namahlamvu omile.
Ukusebenzisa amahlumela ngesikele sokuthena of sonwele noma uphayini kuvunyelwe ngisho ukukhoselisa ekhuphuka rose. Ukuze wenze lokhu, amahlumela akufanele asuswe ukwesekwa, bamane qedani amagatsha, nokuhlanganisa zokugcina ngentambo esithambile.
Ukumboza indaba for rose ebusika: intengo
Nikeza ukwaziswa okunembile amanani akunakwenzeka, ngaphandle Indlela. Ukukala ixhomeke umakhi, esifundeni ngisho isizini.
Intengo polyethylene (igama ethandwa phakathi kwabantu - "greenhouse ifilimu") kuncike kwabantu bayo. Ngakho, izindleko premium indaba ruble 10-15 imitha ngalinye. Polyethylene Okuhlezi emqondweni kuyabiza - isilinganiso ruble 40-45.
Intengo elinama okungezona nokwelukiweyo zokwenziwa ngenhla. Ukuze ukuminyana spunbond ka 17, 42, 60 g / sq. m 3,2h10 ngendwangu osayizi kuyodingeka bakhokhe, ngokulandelana, 170, 330, ama-ruble angu-455.
Cishe ngaso leso ububanzi efanayo izintengo geotextiles. I kwabantu lewebhu 200 / sq. m kuwufanele 22-50 ruble ngamunye imitha square.
Ilungiselela ama-rose ebusika: Izici
Inqubo kulungiselelwa iyiphi izitshalo ebusika, kuhlanganise rose, akuyona elula njengoba kubonakala efika kuqala. Okokuqala udinga lokufeza ezempilo ukulungiselela lo mcimbi, futhi kuphela esigabeni sokugcina edingekayo ufune ukuhlanganisa indaba kuphela ngoba rose. Indlela ukufihla rose ebusika, angithi? Udaba Usuku imfundamakhwela wensimu, futhi nakho.
Okokuqala, kudingeka sithole ukuthi isitshalo ilungele ubusika. Uma ehlathini rose ungaphakathi Septhemba amahlumela, ababethi umbala obomvu - ke kuwuphawu ukukhula okunamandla. Lesi sitshalo ayikalungi ebusika, hhayi zanqwabelana isilinganiso esifanele carbohydrate, futhi amahlumela abangakabi bok. Rose udinga usizo. Ukuze wenze lokhu, sezihlahla ezidla phosphorus umquba, phusha out iphuzu ezikhulayo futhi asuse egqwalile flower efihlekile.
Okwesibili, njengoba ekuqaleni kuka-September kufanele ayeke ziba ngcono inhlabathi emhlabeni rose, kanye kumiswa izitshalo. It liyadingeka ukuze avimbele ezishukumisayo ukukhula amahlumela kusuka ithule efihlekile. Ekupheleni kuka-October - ekuqaleni kuka November, kanye isitshalo wasusa zonke amaqabunga. Lokhu kwenziwa ukuze zingasivimbi ukuba abolile e Ebusika yayihlala ngaphansi kophahla.
Ngakho, ngaphambi kokuba indawo rose ebusika esehlanganise izinto, ikakhulukazi lesi samuva kufanele kucatjangwe ngako ngekucophelela. Futhi uhlole ngezici ezinhle nezimbi.
Amagilebhisi uHarold: incazelo ezihlukahlukene, izithombe kanye nokubuyekeza
INdodana Amazambane: grade incazelo, izithombe, izibuyekezo, ukunakekelwa, umkhiqizo kanye nezici
Linum grandiflorum: ezikhula imbewu. Indlela anakekele yefilakisi engadini?
Indlela yokwenza ukupholisa ngokuzenzekelayo zokugcina ngezandla zabo
Ufulawa dolomite: asetshenziswa kwezolimo
Alla Dovlatov ngaphambi nangemva plastic. Imilando radio ezidumile TV umethuli
Tank Abbott: fighter ngesikhathi
Yiziphi izinto ezingeyona ingxenye yefa?
Izici zefilosofi yaseRussia
Crochet Izikhwama: isikimu kanye nencazelo
I-grenade yokuzivikela yemibhalo «limonka» F-1: incazelo, izici nokubuyekeza
Izincwadi Japanese. Umlando yentuthuko
Leucocytes endleni kusukela ingane: izimbangela. Norma LEUKOCYTE e kwesihlalo usana
Yini yemibuzo okumelwe uzibuze yona ngaphambi kokuthenga ekhaya?
Kuyini elalenziwa? Vula imfihlo!
Ezinyangeni eziningi kanjani ingane iqala ukuthi unikezele kusukela emuva kwesisu
Equity iqhaza ukwakhiwa kwezindlu